Linux kernel timu ichatora kodhi yemafambiro | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux kernel timu ichatora kodhi yemafambiro
Ithimba chii mukutarisira kugadzira Linux kernel, ikozvino inotora kodhi yekuzvibata, kuburikidza inozoshandiswa kugadzirisa kusawirirana kwemukati, kunyange pamberi paive nekodhi, asi yainzi kodhi yekukonana.
Este yaishandiswa kuyananisa mamiriro akaoma, izvo nenzira hazvisi zvakajairika muchikwata. Zvino zvese zvachinja uye kodhi nyowani yemafambiro ndiyo ichauya kuzoshanda panzvimbo yekuyera nekuyera kukakavara kunoshanda kutungamira maitiro evanhu.
Iyi kodhi nyowani yemaitiro yekuzotambirwa nevashandi vese vari kutarisira kugadzirwa kweLinux Kernel yakaziviswa naGreg Kroah-Hartman uyo akatumira e-mail kuteedzera kubva kuLinus Torvalds nekodhi yemafambiro.
Kubudikidza nechiyero chitsva ichi chakarongwa kuti vese vashandi vashande nesimba kuti zvinhu zvidzikame Uye nenzira yakanakisa, yekuti kunyangwe hazvo senge pese pese vanhu vachibatanidzwa, hazvisi zvakadaro nguva dzese.
Ndokusaka iyi kodhi nyowani inoshevedza munhu wese aripo nenzira yakasarudzika kwazvo.
1 Compact mupiro Code yeKufambisa
2 Basa redu
Compact mupiro Code yeKufambisa
Kubva pane iyi nyowani kodhi yekuzvibata, Isu tinogovana zvarinazvo:
Nekuda kwekusimudzira nharaunda yakavhurika uye inogamuchirwa, nevashandi pamwe nevatsigiri vakazvipira kuita kutora chikamu muchirongwa chedu nenharaunda yedu chiitiko chisina kushungurudzwa kune vese, zvisinei nezera, kukura, kuremara, dzinza, hunhu hwepabonde, kuzivikanwa kwechikadzi uye kutaura. , huwandu hwechiitiko, dzidzo, mamiriro ezvehupfumi, nyika, chimiro chako, dzinza, chinamato kana hunhu hwepabonde uye maitiro.
Mienzaniso yemaitiro iyo inobatsira mukugadzira nharaunda yakanaka inosanganisira:
Kugamuchira uye kusanganisa kushandiswa kwemutauro
Iva nekuremekedza maonero akasiyana uye zviitiko nenyasha gamuchira kutsoropodzwa kunovaka
Kutarisa pane zvakanakira nharaunda
Ratidza tsitsi kune dzimwe nhengo dzemunharaunda
Mienzaniso yemaitiro asingagamuchirwe nevatori vechikamu anosanganisira: kushandiswa kwemutauro wepabonde kana mifananidzo uye kusada kuita zvepabonde kana pfungwa yepamusoro (mupfungwa yekuenda pamusoro)
Kutsika, kudana mazita / kutaura zvinonyadzisa, uye kurwiswa kwevanhu kana zvematongerwo enyika
Kushungurudzwa paruzhinji kana munzvimbo yakavanzika
Kutumira ruzivo rwakavanzika rwevamwe nhengo dzechikwata, senge bvunzo yemuviri kana email kero pasina mvumo yakajeka
Humwe hunhu hunogona kutariswa nenzira inokodzera munzvimbo yehunyanzvi
Vanochengeta vane basa rekuchenesa maitiro maitiro zvinogamuchirika uye zvinotarisirwa kutora matanho akakodzera ekugadzirisa nekuita zvakanaka mukupindura maitiro asingagamuchirike.
Vanochengetedza Une kodzero uye mutoro wekudzima, kugadzirisa kana kuramba Makomendi, zvipikirwa, makodhi, misoro yewiki, matambudziko uye zvimwe zvipo dzisina kuenderana neKodhi yeMitemo iyi, kana kurambidza kwenguva pfupi kana zvachose kupa mupiro kune imwe tsika yavanofunga kuti yakakodzera, kutyisidzira, kugumbura kana kukuvadza.
Kunyange zvakadaro ingori chikamu chidiki cheichi, neizvi tinogona kuona kuti kodhi iyi yavanofanira kutora, inoitwa nenzira yakanakisa kuitira kuti munhu wese anobatanidzwa ade kuona mhinduro inogoneka yekubudirira kweLinux.
Iyi nzira yekuvandudza yakaratidzirwa kuti inogadzira yakasimba kwazvo sisitimu yekushandisa kernel yenguva dzese, uye iwe haudi kuita chero chinhu kukonzeresa kuendesa mhando uye zvingangoitika mhedzisiro.
Pakupedzisira timu yese inokokwa uye inokumbirwa kuyedza kuchengetedza zvinhu zvevanhu uye kutarisisa pazvinhu zvehunyanzvi zvinobatanidzwa.
Isu tese tiri vanhu uye kushungurudzika kunogona. Iva wakareba pamativi ese eichi chiitiko. Edza kugara uchifunga mupfungwa dzisingafi Mazwi aBill naTed: "Ivai vakanaka kune mumwe nemumwe."
Si unoda rumwe ruzivo nezve shanduko idzi, kune mamwe mameseji eruzhinji ayo vanochinjana pakati penhengo dzechikwata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Linux kernel timu ichatora kodhi yemafambiro
Zvakakosha here kutumira denderedzwa kuti vanhu vazive izvozvo? Zvaiita sezviri pachena.
BlackArch Linux yatove neinopfuura 2000 zvishandiso zvehunhu kubira
Kanganiso yekumisikidza muMongoDB yakapa mukana kune database